Lululook iPad Magnetic Holder Fitsapana. Vaovao IPhone
Luis Padilla | 15/07/2021 20:00 | iPad Air, iPad Pro
Lululook dia manolotra fanohanana ho an'ny iPad vita amin'ny aliminioma tanteraka ary mampiasa andriamby mahery hanakanana ny iPad amin'ny toerany, miaraka amin'ny mety hanitsiana ny fironana sy ny fironana.
Ny azo atolotry ny fijoroana ho an'ny iPad dia betsaka, ary saika ny ankamaroan'izy ireo dia mikendry fampiononana bebe kokoa rehefa mampiasa azy io, na inona na inona asantsika. Afa-tsy rehefa mampiasa ny Apple Pencil ianao, ny fananana iPad amin'ny toerana avo kokoa noho ny latabatra no ahazoana aina indrindra amin'ny fihinanana atiny multimedia sy amin'ny fampiasana azy amin'ny automatisation birao, lalao sns. Ary noho izany dia mila fanohanana ianao, toa an'ity izay notsapainay androany avy any Lululook.
Vita amin'ny aliminioma, ny kalitaon'ny fanorenany dia tena tsara, vokatr'izany fanohanana tena matanjaka sy marin-toerana izany. Ny tongotra mijoro dia saika mitovy amin'ny famolavolana ny tongotry ny iMac, na dia matevina kokoa aza. Ny takelaka be loatra an'io fitaovana io dia mifamatotra amin'ity tongotra ity miaraka amin'ny vatofantsika mamela ny fihodinan'ny 360º hanova ny orientation an'ny iPad, ary mitongilana amin'ny -20º ka hatramin'ny 200º. Noho izany isika dia afaka mampiasa ny iPad amin'ny lafiny marindrana sy mitsangana, ary afaka manamboatra ny fitongilanan'ny efijery araka izay itiavantsika azy. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny hetsika miadana be tsy misy banga.
Ny fametahana ny iPad amin'ny fototra dia vita noho ny andriamby mahery izay apetraka stratejika hanatevin-daharana ireo andriamby izay ampidirin'ny iPad mihitsy. Matanjaka ity firaisana ity, tsy milatsaka ny iPad alohan'ny hetsika ataontsika, ary azontsika atao ny manodina azy tsy misy tahotra fa hiala amin'ilay tohana izy. Raha ny fampiasana azy amin'ny fonony, raha manify izy ireo (latsaky ny 0,8mm) dia tsy hisy ny olana, ary i Lululook dia manoro hevitra ny hampiasa fonosana andriamby nefa tsy matevina kokoa.
Lululook dia manolotra antsika hijoro miorina amin'ny aliminioma miorina tsara miaraka amina mekanisma fametahana andriamby izay tena mahazo aina sy azo antoka. Ny fahaizana manitsy ny zoro mitongilana amin'ny efijery ary mametraka azy roa mitsivalana sy mitsivalana ary mahatonga azy io ho fitaovana tsara ampiasaina amin'ny klavier, handevona ny atiny multimedia na hilalaovana mampiasa mpanera mifanentana. Hita avy amin'i Lululook amin'ny $ 59,99 en Ity rohy ity. Misy ny maodely mifanaraka amin'ny iPad Air 4, iPad Pro 12,9 ″ ary 11 both, na volafotsy na volondavenona misy habaka.
Navoaka tamin'ny: 15 de julio de 2021
Fanovana farany: 15 de julio de 2021
Kalitaon'ny fitaovana sy ny fanamboarana
Fihodinana 360 sy fironana 220º
Tompon'ny andriamby tena ahazoana aina
Haavo tsy azo ovaina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Notsapainay ny tompon'ny iPad magnetin'i Lululook